8 Dzakasiyana Nzira Kudzidzira Kwemuchina Kuchasimudzira Iyo Ed-Tekinoroji Sector Muna 2021 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Machine Learning, tekinoroji mune dzidzo
Machine Learning uye chakagadzirwa Intelligence zviri kukonzera bongozozo muminda isingaverengeke nemaindasitiri, pamwe nedzidzo. Zvinoenderana ne Musika wekutsvaga Injini mushumo, yepasi rose AI mumusika wezvedzidzo inosvika kusvika $ 5.80 bhiriyoni pagore ra2025 pakomboni yekukura pagore chiyero che45%.
Tekinoroji mukirasi inova iri kuwedzera kufarirwa apo isu tichifamba kuburikidza ne21st zana remakore. Malaptop ari kutora nzvimbo yemabhuku ekare, uye nerubatsiro rwemichina yakangwara, tinogona kudzidza nezve zvese zvatinoshuvira. evanhu vezvenhau kwave kwose kwose, uye nzira yatinoshandisa nayo tekinoroji yakashandura mararamiro atinoita zvachose. Inobatsirawo vadzidzisi uye vadzidzi kubatanidza dhijitari uye kuchinjanisa zvinhu, tarisa kwekutanga kwezviwanikwa kuburikidza nekupenya kushandisa chishandiso, kuchengetedza 'chinongedzo chemunhu', icho chakakosha zvakanyanya mukukura kwepfungwa diki.
Kune vaverengi vatsva kune yakakosha pfungwa, machine learning inogona kutsanangurwa sechikamu che chakagadzirwa njere. Inoshandisa nzira dzechiverengero kupa masisitimu emakombuta kugona kudzidza (kuvandudza mashandiro zvishoma nezvishoma pane rimwe basa) nedata pasina kurongwa zvakajeka. Sezvakaita mudzidzo, tinogona kuona machine learning mu mastering analytics uye chakagadzirwa njere.
Mune yanhasi yakazara blog post, isu tichakufambisa iwe nenzira dzakakosha machine learning nekuchinja uye kuenderera mberi neiyo ed-tech chikamu.
Kukosheswa Kwemuchina Kudzidza Muchikamu chedzidzo
Kunyanya nenzira yakapfupika, ML inzira inoshamisa yekudzidza inongoshanduka nekufamba kwemakore. Nekudaro, makambani anobatanidzwa muhunyanzvi hwekudzidzisa anotarisa pakuongorora nzira nyowani dzeruzivo mudzidzo. Uye, sezvo iri muitiro unoramba uchifambira mberi, ramangwana rinongogona kujeka sezvo riri pakati peaya mafambiro asingazombofi akapera chero nguva munguva pfupi iri kutevera. Hedzino dzimwe nzira dzinoshamisa machine learning iri kushandura dzidzo sezvatinoiziva nhasi-
Machine pakudzidza ine simba rekupa zvirinani zvirinani, kurongeka kwekharikhulamu, uye manejimendi. Inobatsira kuita bifurcate basa zvinoenderana uye inonzwisisa kugona kwemunhu wese. Izvi zvinobatsira mukuongorora kuti ibasa ripi rinonyanya kukodzera vadzidzisi uye rinoshanda zvakanyanya kune chero mudzidzi.
Inoita kuti basa revarairidzi nevadzidzi rive nyore, nokudaro richivaita kuti vafare zvisingaite uye vagadzikane nedzidzo. Izvo zvinowedzerawo kubatikana uye kufarira kwavo kutora chikamu uye kudzidza. Izvi, zvakare, zvinovandudza kugona kwedzidzo.
Yakasarudzika Kudzidza Chiitiko
ne machine learning zvichiunzwa muzvikoro, vadzidzisi havachanetseke nematanda avanosungirwa kuchengeta pamudzidzi wega wega. Hazvichadi kuti vapedze nguva vachiburitsa pfungwa uye kumisa zvinangwa zvemudzidzi wega wega. Nekufambira mberi kwe machine learning, michina ichakwanisa kuita izvi pachayo.
Iyo yakasarudzika kuseri kwechinhu ichi kubatsira vafundisi vemazuva ano kupupurira kuti yega uye yega pfungwa inofanira 'kugayiwa' sei nevadzidzi. Nekudaro, panzvimbo pekungoraira mazano kuruzhinji, vadzidzisi vanogona kuona kuti ndedzipi nzira dzisiri kushanda zvinoshamisa uye kudoma kuti vanganyatso kubatanidzwa sei mukarikhulamu kuti vashande zvirinani.
Machine pakudzidza muchimiro che predictive analytics inogona kusvika pamhedziso pamusoro pezvinhu zvinogona kuitika munguva pfupi iri kutevera. Iyo inotsanangura maitiro ekuziva zvese nezve kufunga uye zvinodiwa nevadzidzi. Nerubatsiro rweyedzo yekirasi uye mhedzisiro yehafu yegore, zvinogona kunyatsonzwisiswa kuti ndevapi vadzidzi vari kuzoita zvakanyanya mubvunzo uye kuti ndevapi vadzidzi vanozove nenguva yakaoma mukuzvibata.
Izvi zvinobatsirawo fakaroti nevabereki kuti vagamuchire uye vatore matanho akakodzera. Kubudikidza nesisitimu ino, mudzidzi anogona kubatsirwa zvakanyanya munzira dzinoshamisa uye anogona kushanda pazvidzidzo zvake zvisina kusimba.
Kuongorora Zvese-Zvekutenderera Zvishandiso
Kana mazwi ekuwedzera hnd basa rekubatsira stalwarts chinhu chipi nechipi chokufamba nacho, ipapo kushandiswa kwe machine learning ine chinangwa chekuunza chikamu chekudzidza pamhepo padanho idzva. Ungabvunza sei? ML matekinoroji anoongorora zviri mukati memakosi epamhepo uye kubatsira kuongorora kana mhando yeruzivo yakaunzwa ichisangana nenzvimbo inoshanda. Nenzira yakafanana, inobatsira vashandisi kududzira data uye kuona zviri kutsanangurwa. Vashandisi vanogona kubva vawana iyo data maererano nehunyanzvi hwavo uye zvavanoda, uye ruzivo rwese rwekudzidza runogona kuwedzera zvakanyanya.
Yakagadziriswa Uye Inoshanda Kubata
Pane imwe yakasarudzika application ye machine learning mudzidzo inobata nezvibodzwa nekugodha. Sezvo kosi yega yega yepamhepo inoratidza kugona kudzidza kwenhamba huru yevadzidzi, ivo vane ruzivo rwakakwana mukuaisa. Machine pakudzidza matekinoroji anogona kushandura maitiro ekugidha kuita akati wandei echipiri nyaya. Nenzira isingarambiki, kune nzvimbo uko michina isingakwanise kutora nzvimbo yevadzidzisi, asi kunyangwe mumamiriro ezvinhu iwayo, vanogona kubatsira kusimudzira magiredhi aripo uye maitiro ekuongorora.
Machine pakudzidza nenzira yekudzidza kwemunhu wega kunopawo mudzidzi wega wega ruzivo rwekudzidza ega. Mucherechedzo unoshamisa wekudzidzisa umo vadzidzi vanogona kutungamira kudzidza kwavo, kufambira mberi nekumhanya kwavo, uye mune dzimwe nguva, vachizviitira sarudzo dzakaomarara dzekudzidza. Vadzidzisi vanokwanisawo kukwana kosi uye mwero kuti usangane nezvido zvevadzidzi.
Zita rekushandura kudzidza rinozvitsanangudza. Inoongorora mashandiro emudzidzi mune chaiyo-nguva uye inoshandura nzira dzekudzidzisa. Iyo zvakare inoshandura iyo kharikhulamu yakavakirwa pane yakatarwa dhata. Kupfuurirazve, zvinobatsira kuve nehukama hwehukama uye kuyedza zvakaoma kuchinjira kune izvo zvinodiwa nemunhu zvekuvandudza dzidzo.
Machine pakudzidza inobatsirawo mukukurudzira nzira dzekudzidza dzinofanirwa kutora nevadzidzi nehungwaru. Vadzidzi vanowana mazano akasiyana kubva kune zviwanikwa uye dzimwe nzira dzinoshamisa dzekudzidza kubva kusoftware.
Batsira Vadzidzi Nezvinodiwa Zvakakosha
Machine pakudzidza tekinoroji yakaratidza kuve sosi yakatanhamara yedzidzo inopa kuvadzidzi vane zvakakosha. Vadzidzi vakawanda vane urema vanokurudzirwa kudzidza chidzidzo kuburikidza kuziva mutauro maitiro uye rakapotsa chokwadi teknolojia. Izvi zvinowedzera kuvabatsira nemazvo uye zvinovatungamira kuti vagone kunyatso hunyanzvi kunyangwe misoro yakaoma uye nekuomesesa kwakabatana nechero kurangwa.
Ndizvo zvanhasi! Muindasitiri yedzidzo, machine learning pachine rwendo rurefu rwekufamba. Wese mutambi wechikwata anobatanidzwa muindasitiri yedzidzo anofanirwa kungogashira kuvepo kwehunyanzvi hwakadaro uye kutobatsira mukuisimudza kusvika pakakwirira.
Izvo zvinhu zvekutanga zvinotyaira kukura kwetekinoroji yedzidzo uye musika wekuchengetera pamusika unosanganisira kuwedzera kuri kupinda kwemafoni nhare uye kuwanikwa kuri nyore kwevashandisi ve internet. Chidimbu chiri kukura chetekinoroji yedzidzo chinogonawo kupupurirwa nekuda kwekukanganiswa nedenda reCOVID-19 uye mhando dzekudzidzisa-dzekudzidzira dzekuchengetedza hurongwa hwedzidzo kumhanya zvine mashiripiti
Saka, siya nzira dzechinyakare dzekudzidza uye kumbundira machine learning izvozvo zvaizoshanda kune zvakanakira vanhu. Ichagadzirira ramangwana rine mbiri nerakabudirira riri mberi!